Pot Odds Calculator: Nguva dzose ita sarudzo chaiyo pamitambo yepamhepo yepamhepo!
Pot Odds Calculator software yeWindows masisitimu ayo anoshandiswa kuona zviri nyore kana neimwe nzira yekufonera bheji remupikisi panguva yemutambo wemari weTexas Hold'em poker.
Saka ngatiregei kutaura nezvemitambo, asi nezve iyo mitambo uko shanduko kana zviuru zvemamiriyoni euros zvinobhururuka zvichibva padanho remapofu.
Kuti zvive nyore isu tinogadzikana pane diki shanduko, zvakare nekuti mweya we ThatsLuck hachisi chekudzidzisa green tafura shark, asi kuti kudzidzisa vashandisi kuti vagare vachiita sarudzo yakanakisa, zvisinei nemutambo unofungidzirwa.
Maitiro ekuverenga pamhepo poker poto mikana: kushandisa software
Paunenge iwe watora pasi uye kuburitsa iyo zip faira pane desktop yako, iwe unongofanirwa kuvhura iyo inoitisa uye chirongwa chichava chakagadzirira kushandisa ipapo.
Sezvauri kuona iyo skrini ye Pot Odds Calculator yakasarudzika uye iine ese ekuverenga mabasa anopiwa.
Kunyangwe saizi rehwindo rave nemaune ririmo, izvi kuitira kuti ukwanise kumisikidza chirongwa padhuze nemutambo tafura hwindo usinga pinde desktop zvakanyanya.
Ngatitorei kuona muenzaniso unoshanda wekushandisa: ngatiti iwe ugere patafura yezvinonzi zvidiki zvidimbu, kana iwo matafura uko huwandu hwemapofu ari mumasendi.
Pamwe zvinganzwika sezvisinganzwisisike kwauri, asi ini ndinowanzo kunzwa kutenderera kuti iyo miganhu midiki ikozvino ndiyo mikana inobatsira kutamba, nekuti pamatanho epamusoro hunyanzvi hwevatambi vezvakanaka kana zvakaipa zvakaenzana uye saka chete poker kamuri yekuwana Ndokutenda kune rake. pamari inobatwa.
Ngatidzokerei kumuenzaniso: Uri kubata Q uye J nebhodhi mushure me5-10-K-2 kutendeuka.
Pane imwe nhanho muruoko, mushure mekumhanya uye kutendeuka, mutambi usati wabhejera masendi gumi uye iwe uine yakasarudzika mativi maviri yakatwasuka dhizai muruoko rwako, kureva kuti, kana 10 kana A ikabuda, iwe unovhara iyo poindi uye pamwe vanokunda ruoko.
Iyo Pot ndeye masendi makumi mapfumbamwe: kwakarurama here kudana kubheja gumi muzana pamberi peRwizi?
Nekureva ndiri kureva kuti nekufamba kwenguva sarudzo inobatsira (EV +).
Kubva pane zvaanotiudza Pot Odds Calculator mhinduro ndiIYO, nekuti kana iwe ukatarisa pamufananidzo wechirongwa uine masere masere (makadhi masere anoita kuti uvhare poindi, ndiwo mana ma8 uye mana maAces), iyo Poto inofanira kunge ingangoita makumi mashanu nemasendi kufonera kubheja kwemasendi gumi paTendeuko pamberi peRwizi uye sezvo hari iri masendi makumi mapfumbamwe, iko kushevedza kuri zvechokwadi.
Saka pakupedzisira tinogona kutaura izvozvo Pot Odds Calculator inogona kushandiswa kugara uchiita sarudzo yakanakisa, kana iwe unogona kuichengeta yakavhurika padyo petafura panguva yemutambo, uye uishandise chete kana ruoko rwakakosha zvakanyanya ruchiuya nesarudzo yakaoma kuita.
Zvese zviri pachena? Chinhu chega chaunofanira kudzidza kuverenga mupfungwa pane kubhururuka ndiko kuvhara kwako poindi; semuenzaniso uine vaviri muruoko kuti uite matatu erudzi ako mafambiro ari maviri chete, kuvhara flush nemakadhi maviri pane bhodhi kunze uko vari 2 (ingangove gumi nematanhatu kubvisa kwedu 2 uye 9 pabhodhi), uye saka on, pamambure iwe unogona kuwana zviri nyore akawanda akagadzirira-akagadzirwa matafura ane idzi data.
Download 4973 Downloads